Dock yeApple Tarisa zvakachipa uye zvinobudirira | Ndinobva mac
Yakachipa uye inoshanda Apple Doko
Isu tiri imwe nzira kure neApple tichiisa inofungidzirwa inotevera vhezheni yeApple Watch pamusika. Kana iwe uchitove uine imwe yacho, ingave yekutanga kana Series 1-Series 2, dock iyo yatinokuratidza nhasi ichave iri sarudzo yakanaka kwazvo kwete chete yekuchaja zvekare asi kuve nekwanisi kuve neiyo induction yekuchaja tambo zvakachengeteka.
Urgen idoko rakagadzirwa nealuminium alloy mune imwe nzvimbo yenzvimbo grey iyo inopa kubata kwe minimalism kune iyo contraption. Hukuru hwayo hudiki uye ndizvozvo Ose ari maviri matanho 98mm dhayamita uye 22mm kukwirira.
Vazhinji ndivo varidzi veApple Watch avo vari kutsvaga mabheji ekuchaja kuti vakwanise kudzoreredza mawadhi avo akanaka. Mune ino kesi, iyo yekuchaja base yatinounza haingogona chete kushandiswa sechigadziko asiwo kugona kudzika induction yekuchaja tambo iyo Apple pachayo inotengesa neiyo wachi.
Chimiro chayo chiri cylindrical uye inogona kushandiswa kune ese 38mm uye 42mm Apple Watch kune ese ari maviri modhi yekutanga, senge Series 1 uye Series 2. Kana iwe uchida kuziva rumwe ruzivo nezve inojaja base, unogona kubvunza kune next link mairi inowanikwa nemutengo we 9,99 euros. Apple yatove nemhando nhatu dzeApple Watch pamusika ine dhizaini yakafanana, saka zvinokwanisika kuti chizvarwa chinotevera cheiyo Cupertino wachi inosvika nenhau maererano nechimiro uye ukobvu, kunyangwe isu tichivimba kuti izvozvi mabheji ekuchaja anogona kuramba achishandiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Yakachipa uye inoshanda Apple Doko
Iyo Apple Music Festival yasvika kumagumo
Ndezvipi zvakanaka zvatichava nazvo kana tichishanda neAPFS disk system